बुबा साउदीमा, आमा अर्कैसँग गईन् : सात दिनपछि भेटिइन् बेपत्ता तीन वर्षीया छोरी – Wow Sansar
January 6, 2021 123
काठमाडौं । यही पुस ६ गतेदेखि हराइरहेकी तनहुँकी तीन वर्षीय बालिका सात दिनपछि सोमबार फेला परेकी छन् । बुबा साउदी अरबमा कार्यरत रहेको अवस्थामा आमा सोनी थापा अर्कै पुरुषसँग गएपछि हराइरहेकी ती बालिका प्रहरीको सक्रियतमा फेला परेकी हुन् ।
Prevबिहे गर्दागर्दै बेहुलीको मृत्यु !
Nextअन्ततः माघ ५ गतेबाट अनिश्चितकालिन हड्ताल र बन्द गर्ने निर्णय !
भागरथी घटनाका अभियुक्त दिनेशका बुवा भन्छन्, ‘भरोसाको त्यही एउटा छोरा थियो मेरो संसार डुब्यो, मेरै अगाडी कर णी पनि गरेको हुँ भन्छ’ (भिडियो हेर्नुस्)
निर्मलाको ज्या.न लि.ने अ.पराधीको बारेमा यस्तो सूचना प्रहरीलाई आएपछि… (1165)